musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Czechia Breaking News » Czech Republic inogamuchira vafambi veUS vadzoka
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Czechia Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
United States inobatana nerondedzero yenyika dzine njodzi shoma, ichibvumira vashanyi veUS kupinda muCzech Republic.
Pasi pe COVID-19, Czech Republic inoshandisa traffic light system yekupinda zvinodiwa kubva munyika dzakasiyana.
Vagari vemuUS vanogona kufamba mukati meCzech Republic kwemazuva anosvika makumi mapfumbamwe semushanyi asina vhiza inodikanwa.
KN95 kana FFP2 masiki anodikanwa kupinda muzvitoro, nhandare dzendege, zvese zvifambiso zvevoruzhinji, mahofisi epositi, uye matekisi kana kukwira zvikamu.
Ndiyo imwe yenguva dzatave takamirira! Kubva muna Chikumi 21, 2021 vagari vemuUS vanobvumidzwa kudzokera ku Czech Republic pasi pemitemo imwechete iyo yakashanda pamberi pehosha. Izvi zvinoreva kuti vagari vemuUS vanogona kufamba mukati meCzech Republic kwemazuva anosvika makumi mapfumbamwe semushanyi asina vhiza inodikanwa.
Pasi pe COVID-19, Czech Republic inoshandisa traffic light system yekupinda zvinoda kubva kunyika dzakasiyana. Vagari, vagari vechigarire, uye vanogara kwenguva refu vanobva kunyika dzine njodzi (dzakasvibira) nyika - kusanganisira United States - vanogona kupinda muCzech Republic vasina bvunzo kana voga vanodiwa. Pachine miganho kune dzimwe nyika dzinoiswa seyakaenzana, yakakwira, yakanyanya kukwirira, uye ine njodzi yakanyanya. Miganho inotangira pakurambidzwa kwekupinda kweasina kukosha kufamba (senge kushanya uye kushanyira shamwari) kana akasiyana matanho ekuyedza nekuisa wega. Imwe yakakosha noti: iyi yakasvibirira, yakaderera-njodzi chinzvimbo chinoshanda pakupinda muCzech Republic, asi haishande kune iyo yese EU kana Schengen nzvimbo. Vafambi veUS vanofanirwa kutarisa chero zvinodiwa nenyika yega yega yavanoda kushanyira.
Pane imwe nguva pasi muCzech Republic, pane mimwe mitemo yekuziva. Green, yakaderera-njodzi yekupinda chinzvimbo inobvumira vafambi veUS kuti vapinde munyika. Kune mamwe matanho ezvimwe zvinhu sekudya muresitorendi (mukati nekunze), kupinda mumuseum, kuenda kuchiitiko cheveruzhinji, kana kutarisa kuhotera. Kune ese zviitiko zvinoita kuti zororo rikanganwe, vafambi vanofanirwa kuratidza chimwe cheanotevera:
yakaipa PCR bvunzo isingasviki mazuva matatu ekuberekwa
isina kunaka antigen bvunzo isingasviki maawa makumi maviri nemana ekuberekwa
majekiseni emushonga mumwechete: humbowo hwemazuva gumi nemana apfuura dosi, mukati memwedzi mipfumbamwe yadarika
majekiseni maviri-echirwere: chiratidzo chemazuva makumi maviri nemaviri mushure me22st dose, mukati memazuva makumi mapfumbamwe apfuura
majekiseni maviri-echirwere: chiratidzo chemazuva makumi maviri nemaviri mushure me22nd dose, mukati memwedzi 9 yekupedzisira
humbowo hwekurapa hwekuwanazve kubva kuCOVID-19 mumazuva 180 apfuura
Vafambi vanofanirwa zvakare kutarisa nedzimwe nendege kuti vayedze, mafemaki, uye zvimwe zvinodiwa, kunyanya kana vachibatana kuburikidza nedzimwe nyika. Makambani ega ega anogona kuve nezvinodiwa zvakasiyana. Zvinogona kubatsira kutakura yakadhindwa ruzivo uye zvimwe zviwanikwa (semuenzaniso masiki) kubatsira kufambisa rwendo rwako zvakanaka.
Vashanyi vanodawo kurongedza mamwe masiki eCzech Republic. KN95 kana FFP2 masiki (anonziwo "mweya wekufema") anodikanwa kupinda muzvitoro, nhandare dzendege, zvese zvifambiso zvevoruzhinji (kusanganisira mapuratifomu nezviteshi), mapositi mahofisi, uye matekisi kana kukwira zvikamu. Mucheka kana zvimwe zviso zvekumeso zvinodiwa kunzvimbo dzekunze uko kutenderera kwenzanga zvisingaite. Iyi mitemo inoshanda kune wese munhu, kusanganisira vashoma vane njodzi (girini) vafambi vanodzivirira.
Saka zvirokwazvo, kuchine hoops mashoma ekusvetuka kuburikidza, asi kupfuura zvese, tinofara kuti kufamba kwadzoka! "Takamirira izvi kwenguva yakareba," anodaro Michaela Claudino, director weCzech Tourism USA & Canada. “Tinotarisira kuti vashanyi vanogona kutora nguva yekuona zvinozivikanwa, asi nekuzivawo mamwe matombo anokosha akavanzika eCzech Republic. Kungotarisa kuvakwa kunoshamisa, tsika nemagariro, chikafu, zvinwiwa uye kunakidzwa kuchaita kuti rwendo rwako rukoshe zvakanyanya. ”